गौतमबुद्ध क्रिकेटरंगशालाको पूर्वाधार निर्माण धमाधम, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई साढे पाँच करोड सहयोग प्राप्त - Pradesh Dainik
गौतमबुद्ध क्रिकेटरंगशालाको पूर्वाधार निर्माण धमाधम, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई साढे पाँच करोड सहयोग प्राप्त
चितवन, गौतमबुद्ध अन्तर्रािष्ट्रय क्रिकेट रंगशाला निर्माणस्थलमा यति बेला धमाधम काम भइराखेको छ। रंगशाला निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को शान्ति चोकमा रहेको रंगशाला निर्माणस्थललाई चारैतिरबाट घेर्ने, अस्थायी गेट बनाउने, सुरक्षाकर्मी बस्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सु? गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाएको छ। फाउन्डेसनका प्रतिनिधि चन्द्र खड्का पूर्वाधार निर्माणका लागि रंगशाला निर्माणस्थलमा खटिएका छन्। २० बिघा ६ कट्ठामा बन्न लागेको रंगशालाले ओगट्ने क्षेत्रलाई फलामको पाइप राखेर टिन लगाएर घेर्ने काम अहिले भइरहेको छ। त्यसका लागि वेल्डर ग्?पले निर्माणस्थललाई घेर्ने काम अघि बढाएको छ। यो काम केही दिनमा सकिने उनले जानकारी दिए। यस्तै, रंगशालाको साइट अफिस बनाउन रंगशालानजिकैको एउटा घर लिइएको छ। त्यसमा पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइराखेको छ। निर्माण सामग्री ल्याउने, प्रवेश गर्ने कामका लागि अस्थायी पूर्वाधारका रूपमा गेट निर्माण गरिँदै छ। निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री राख्ने गोदाम घरलगायतका पूर्वाधार तयार गर्न अहिले दैनिक ५० जना कामदार खटिएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि रंगशालाको गु?योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने फाउन्डेसनका प्रतिनिधि खड्का बताउँछन्। जमिन सम्याउनेदेखिका सबै काम सोहीअनुसार गरिने उनले जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को शान्ति चोकमा रहेको रंगशाला निर्माणस्थललाई चारैतिरबाट घेर्ने, अस्थायी गेट बनाउने, सुरक्षाकर्मी बस्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सु? गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको प्रारम्भ गर्न घोषणा गरिएको दिनबाट छ महिनाको अवधिमा डिपिआर तयार गर्ने भनिएअनुसार नै काम अघि बढाइएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल बताउँछन्। फाउन्डेसनका पदाधिकारी भरतपुरमा नै आएर रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको एक महिना पूरा भएको छ। माघ २० गते रंगशाला निर्माणस्थलमा आएर डिपिआर निर्माण प्रारम्भ गरिएको घोषणा गरिएको थियो। निर्माण घोषणा भएको एक महिनाको अवधिमा रंगशाला निर्माणका लागि फाउन्डेसनलाई साढे पाँच करोड ?पैयाँ सहयोग प्राप्त भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए। वैदेशिक यात्रामा गरिने कार्यक्रमहरूबाट सहयोग संकलन गर्ने काम थालिएको उनी बताउँछन्। यस्तै, फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्न धेरै स्थानमा सहयोग संकलन समितिसमेत बनाइएको उनले बताए। संकलित रकम पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्न फाउन्डेसन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने दातालाई सहयोग संकलनका रसिद पनि दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
रंगशाला निर्माणस्थलमा काम नरोकियोस् भनेर सामान राख्नका लागि गोदाम घर बनाउन थालिएको उनले बताए। शिलान्यास गरिसकेपछि काम रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। डिपिआर बनाउनका लागि पनि आवश्यक रकम संकलित सहयोगबाट नै खर्च गरिने उनले बताए। डिपिआर बनिसकेपछि विषय विज्ञसँगको सहकार्यमा निर्माणको काम अघि बढाइनेछ। सु?मा नै गृहकार्य गर्दा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट आधुनिक रंगशाला बनाउन सकिने भएकाले त्यसमा प्राथमिकता दिइएको छ। ‘जस्तो परियोजना हो त्यसको सम्पूर्ण तयारी गरेर पूर्वाधार बनाउने काम सु? गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिलान्यास गरिएको मितिले दुई वर्ष्भित्रमा रंगशाला बन्छ।’ फाउन्डेसनले सरकारको नीतिनियमभित्र बसेर काम गर्ने उनी बताउँछन्। रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी फाउन्डेसनले लिँदा गरिएका टीका टिप्पणीलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। ‘नशानशामा सामाजिक सेवा छ। कुनै पनि स्वार्थ छैन,’ उनी भन्छन, ‘देश बनोस् भनेर अभियान सु? गरिएको हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ।’
रंगशाला निर्माणका लागि फाउन्डेसन आर्थिक रूपमा सक्षम नभए पनि संयोजनको भूमिकामा आएको कट्टेलले बताए। निराशा मात्र भइरहेको समयमा आशाको दियो मात्र बाल्न खोजेकाले फाउन्डेसनमार्फत आँट गरिएको उनको भनाइ छ। रंगशालाको नाम कुनै विवादको विषय नभएको उनी बताउँछन्। गौतमबुद्धप्रति भएका भ्रम चिर्नका लागि नाम परिकल्पना गरिएको उनले बताए। ‘धेरै ठूलो परियोजना हो। सबैले यसमा अपनत्व ग्रहण गर्नु हुनेछ’ उनी भन्छन्, ‘हिजोको दिनमा सीमित ठाउँ र समुदायका लागि हामीले काम गरेका थियौं। रंगशाला निर्माणको काम देशका लागि हो।’ रंगशाला निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको खेलकुद क्षेत्रको समुन्नत विकाससँगै खेलाडीको स्तरोन्नति र विकासलाई अघि बढाउनु भएको उनले प्रस्ट पारे।
खेलकुदको संरचना र खेलाडीको अवस्थाका बारेमा बुझेर रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाइएको हो। क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिए पनि यो क्रिकेटको मात्र रंगशाला होइन, करिब ३५ वडा खेल खेल्न मिल्ने संरचना बनाइनेछ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा देशको चिनारी उच्च बनाउने परिकल्पना गरिरहँदा रंगशालालाई एकेडेमीका रूपमा अगाडि बढाइने उनी बताउँछन्। रंगशालामार्फत खेलकुदको हब निर्माण गर्न खोजिएको र हरेक जिल्लाबाट खेलाडी छनोट गरेर ल्याएर उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरिने उनले बताए। रंगशाला निर्माण पूरा भएभछि धेरैभन्दा धेरै अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्दा हुने आम्दानी खेलाडी र खेलको विकासका लागि खर्च गरिनेछ। भरतपुर महानगरले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जमिन रंगशाला बनाउनका लागि फाउन्डेसनलाई दिएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ३ अर्ब ?पैयाँको लागतमा ३० हजार दर्शक अट्ने रंगशाला बन्नेछ।